ဝက်အူ ဦး စီးစက်
ဝက်အူ Threading စက်
Self Drilling ဝက်အူပုံစံစက်
max အရှည် 40mm နှင့်အတူဝက်အူအောင်များအတွက်ဝက်အူ Cold Heading စက်
max အရှည် 60mm နှင့်အတူဝက်အူအောင်များအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ဝက်အူစက်
max ကို 90mm နှင့်အတူဝက်အူအောင်များအတွက်ဝက်အူပြုလုပ်ခြင်းစက်
max အရှည် 102mm နှင့်အတူဝက်အူအောင်များအတွက် One Die နှစ်ခုအောက်အအေးခဲစက်
max အရှည် 130mm နှင့်အတူဝက်အူအောင်များအတွက်အော်တိုဝက်အူစက်
max ကို 40mm နှင့်အတူဝက်အူအောင်များအတွက်ဝက်အူ Threading စက်
max ကို 60mm နှင့်အတူဝက်အူအောင်များအတွက်ဝက်အူ Rolling စက်
max အရှည် 80mm နှင့်အတူဝက်အူအောင်များအတွက် Threading စက်
ဝက်အူစက်၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ဖို့ဘယ်လို? Any machine and equipment need to be cleaned and maintained regularly. If the time is long, the machine and equipment are easily damaged, and the service life is greatly shortened. Therefore, when using the automatic lock screw machine, daily cleaning and maintenance are also required. The specific operation method is as…
ဝက်အူစက်များတွင်လျစ်လျူရှုရန်လွယ်ကူသောပြproblemsနာနှစ်ခု 1. From the design and principle of the automatic lock screw machine, it does not have any major shortcomings in itself, but many times we will ignoreaproblem, that is, screw quality! Domestic screw manufacturers produce more defective screws than foreign countries. For example, big heads, flat heads, and…
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းများကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်, သတင်းအချက်အလက်တိုးတက်စေရန်ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, အတွင်းပိုင်းကိုသင့်ကိုဆက်သွယ်ပါမည် 24 နာရီ
လိပ်စာ: Wangde လမ်းအမှတ် ၆, Jiutan ကျေးရွာ, Xiuquan လမ်း, Huadu ခရိုင်, Guangzhou City, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်,တရုတ်
မူပိုင်ခွင့်© 2021 ဝက်အူခေါင်းအဖုံးဝက်အူလှည့်စက်ကိုယ်ပိုင်စက်တူးစက် ၀ တ်စက်ဖွဲ့စည်းသည့်စက်အဝတ်လျှော်ဝက်အူတပ်ဆင်ခြင်းစက်အားလုံးမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်.
WeChat QR ကုဒ်